ဆရာလေး အိမ်ကို ဘုရားပန်း လဲပေးနေတဲ့ (၁၆) နှစ် ကောင်မလေး ရဲ့ ဖြစ် ရပ် – Let Pan Daily
ဆရာလေး အိမ်ကို ဘုရားပန်း လဲပေးနေတဲ့ (၁၆) နှစ် ကောင်မလေး ရဲ့ ဖြစ် ရပ်
Let Pan | May 15, 2020 | Knowledge | No Comments
ကျောင်းဆရာ အိမ်မှာ ပန်းအိုး လဲပေးရင်းကနေ စိတ်ဖောက်သွားတဲ့ တောသူမလေး မိအေး
မိအေး တဟင့်ဟင့်ရှိုက်နေလေ သည်..။ မျက်ရည်များစိမ့်ဖြာဝေ့ဝဲ၍ဘဝကိုအစားခံလိုက်ရသလို..တလှိုက်လှိုက်ဖိုငင်နေသည်။ “သမီး ဘဝတော့ ပျက်ပါပြီ အမေရယ်” “ညည်းကို မေးနေတယ် ဘယ်သူနဲ့လဲလို့” “ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း” မိအေး ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင် ခါရမ်းနေလေသည်..။
အမေဖြစ်သူ ဒေါ်မြသစ် ခြေမကိုင်လက် မကိုင် မိဖြစ်နေလေသည်..။တောသူတောင်သား.. ရိုးသားတဲ့သူတို့သားအမိလေးမှာ..အခုလို. ကြမ္မာငင်လာရတယ်လို့..။ “ဒီမှာ မိအေး ညည်းဒီလိုငိုနေလို့မပြီးဘူး.. ကာယကံရှင်ကဘာတဲ့လဲ ညည်းကို.. တာဝန်မယူနိုင်ဘူးတဲ့လား..” “ဟင့်အင်း အမေ..သူ သိတောင်မသိသေးဘူး” “ဟင်..ဟုတ်လား ပြောပြောသမီး.. ဘယ်သူလဲ အမေ ကောင်လေးနဲ့တွေ့ပြီး.. ဒီကိစ္စတာဝန်ယူပေးအောင် ညှိနှိုင်းပေးမယ် အမေတို့ သားအမိအရှက်တကွဲအကျိုးနည်း မဖြစ်ခင်လေး..” “ဟင့် ဟင့် ဟီးအဟီး..” မိအေး ငိုသာ ငိုနေလေတော့သည်..။
“ငိုနေလို့ မပြီးဘူးသမီး အမေတို့သားအမိ ဒီရွာလေး မှာ ပန်းစိုက်ရောင်းပြီး.. ရိုးရိုးသားသားနေလာခဲ့တာ.. မုဆိုးမသမီးဆိုပြီး အနိုင်ကျင့်တာတော့.. အမေမခံဘူး သမီးရှေ့မှာအမေရှိတယ်:” မိခင်ရဲ့ရင်နင့်သံနဲ့ပြောစကားကြောင့်.. မိအေးရင်ထဲ လှိုက်ကနဲဝမ်းနည်းသွားပြီး.. ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးလေတော့ သည်..။ ပြီးမှ…တိုးလွှလွှအသံလေးနဲ့… “အဟင့် ဟင့် ဟိုဟို..ဆရာလေး.. ကိုပင်ကို.” “ဘာ ဘယ်လို..” ဒေါ်မြသစ်မျက်လုံးပြူးသွားသည်..။ရင်ဘတ်လက်လေးဖိပြီးယူကျိုးမရဖြစ်သွားလေသည်။ ဆရာလေးကိုပင်ကိုဆိုတာ.. သူတို့ရွာလေးကို မြို့ကစာလာ သင်ပေးနေ သော ကျောင်းဆရာလေးဖြစ်သည်..။
ရွာရဲ့ပရဟိတတွေအသင်းလေးထူထောင် ပေးပြီး သာရေးနာရေးများကိုဦးဆောင်လမ်း ပြဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူ..၊ခေတ်နဲ့အဆက် ပျက်နေသောသူတို့ရွာလေးကို အစစအရာ ရာ မျက်စိဖွင့်အလင်းပြသူ.၊တစ်ရွာလုံး.. လေးစားကြည်ညိုအားထားရသူ၊.. ထိုအထဲတွင်..ဒေါ်မြသစ်လည်းပါသည်လေ.၊ ဆရာလေးရဲ့စေတနာအနစ်နာ ရွာအပေါ် ထားတဲ့မေတ္တာ..သက်ကြီးရွယ်အိုများကို.. ရိုသေကိုင်ရိုင်းတက်တဲ့လူလိမ္မာသားလေးဆို ပြီး ကြည်ညိုချစ်ခင်လေးစားခဲ့လေသည်..။
ထို့ကြောင့်ပင် ပန်းရောင်းပြီးအသက်မွေးတဲ့ သူတို့သားအမိအနေနဲ့ဆရာလေးကိုလေးစား ကြည်ညိုလို့ ၊ ရွာကပေးနေထားတဲ့ အိမ်လေးမှာတစ်ကိုယ်တည်းနေတဲ့ဆရာလေး အိမ်ကို ၊သမီးဖြစ်သူမိအေးကိုမနက်တိုင်း.. ဘုရားပန်းလဲပေး၊အိမ်သန့်ရှင်းပေး၊အဝတ် လျော်ပေးဖို့ စေလွှတ်ခိုင်းခဲ့သည်..။ ဆရာလေးကငွေကြေးယူဖို့ပြောပေမယ့်မယူ ခဲ့ဘူး..၊ဒါကိုကျေးဇူးတုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့.. ဆရာလေးမြို့ကိုသွားတိုင်းပြန်လာရင်.. ဒေါ်မြသစ်အတွက်ဆေးဝါးလေးတွေ၊မိအေး အတွက်အင်္ကျီလုံချည်လေးတွေ အလျင်းသင့် သလို ဝယ်လာခဲ့ပေးလေသည်..။
အခုတော့ အခုတော့ အခုလိုလုပ်ရက်တယ်..၊ လုံးဝမထင်ထားတဲ့ဒေါ်မြသစ်..စိတ်အကြီး ကျယ်ဆိုးသွားသည်..။ “ဒါ ဒေါင်းယောင်ဆောင်တဲ့မြေခွေးပဲ” စိတ်ထဲရှိသလိုရေရွတ်လိုက်သည်..၊ ဒေါင်းယောင်ဆောင်သောကျီးလည်းမဟုတ်. “ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲ လာမိအေး.. မုဆိုးမသမီးဆိုပြီး ခြေတော်တင်တာ.. မခံဘူးဟေ့..လာခဲ့ ဒီကိစ္စအပြက်ရှင်းမယ်” ဒေါ်မြသစ် သမီးဖြစ်သူမိအေးလက်ကိုဆွဲပြီး ဒရောပါးထွက်လာခဲ့လေသည်..။ ရွာလည်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်သို့…. ******************************** အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ဝင်လိုက်တော့..၊ဝိုင်းအုံ နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ပြီး ဆရာကိုပင်ကို.. မျက်လုံးပြူးသွားသည်..၊လာခေါ်တဲ့ဆယ်အိမ် မှူးဧးသုရဲ့ပြောစကားအရ မိအေးမှာ.. သူ့ကိုယ်ဝန် လွယ်ထားရလို့ ၊အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆီလာတိုင်နေတယ်တဲ့၊ကိုပင်ကို..မျက်လုံး ပြူးသွားသည်၊မိအေးဆိုတာ..မီးကောင်ပေါက် အရွယ်ကလေးမလေး၁၆ ၁၇နှစ်အရွယ်လေး နှမလေး လိုသဘောထားခဲ့သည်၊စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားဖူး၊ဘယ်လိုကြောင့်များ… “လာလာ ဆရာပင်ကို” သူလာတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမျက်နှာမသာ မယာနဲ့လှမ်းခေါ်သည်၊လူအုပ်ကရှဲပေးလိုက် တော့၊အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစားပွဲရှေ့မှာတရှုံ့ရှုံ့ငို နေသောမိအေး၊ဘေး မှာသူ့ကိုမျက်ထောင့်နီ ကြီးနဲ့ကြည့်နေတဲ့ဒေါ်မြသစ်… ”
ကဲဆရာ..မိအေးက သူ့မှာ ဆရာနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီးတဲ့..” “ဟုတ်ကဲ့ အဲ မဟုတ်ကဲ့.. နေပါဦးဗျာ မိအေးကိုကျွန်တော်မေးပါရစေ” “ဒီမှာဆရာ ကျုပ်တို့ရွာသူကို စားပြီးနားမလည် မလုပ်ပါနဲ့” ဘေးက ကာလသားခေါင်းမိုးပြေးကဝင်ပြော သည်..၊ “အာ စားပြီးနားမလည် လည်းမလုပ်ပါဘူး ဝါးပြီးထွေးထုတ်လည်းမလုပ်ပါဘူး.. အခုဟာ က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိလို့ မေးပါရစေလို့..” “ဟား ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာ.. မိအေးကဆရာ့အိမ်ကိုနေ့တိုင်းပန်းလာလဲပေး ဝေယာဝစ္စလာလုပ်ပေးနေတာပဲ.. တစ်နေ့ ဆရာမူးလာမယ်၊မိအေးကဆရာ့အိပ် ခန်းထဲသန့်ရှင်းရေး ဝင်လုပ်ပေးနေမယ်၊
မူးလာတဲ့ဆရာက၊ဆရာပြောပြောနေတဲ့.. မြို့ကဆရာ့ချစ်သူမှဲ့နီလေးနဲ့အမြင်မှားမယ် ပြီးတော့ မိအေးကို ဟွာပြုမိမယ်၊မိအေးက ရှက်လို့ဘယ်သူ့မှမပြောပဲနေမယ်၊ဆရာကမူး ပြီးအိပ်ပျော်သွားပြီး၊ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူး၊ အဲ အခုကျအထုတ်အထည်ပေါ်လာတော့ မိအေးကဖော်လိုက်တယ်၊ဒါပဲပေါ့ဗျ..” ကာလသားခေါင်းမိုးပြေးကသူထင်ရာစွတ် ပြောနေလေသည်..။ “ဟာဗျာ ကျွန်တော်ကမနက်အစောကြီး.. မူးရမလားဗျ ၊ကျွန်တော်တစ်ခါတလေ ပဲသောက်စားတက်တယ်၊ဒါတောင်ရွာမှာ ဘယ်တော့မှမသောက်ဘူး၊ကျောင်းပိတ်ရက် မြို့သွားတဲ့အခါ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့မှ နည်းနည်းပါးပါးပါ၊ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးဖြစ်တာ မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ကြီးတော့.. ဟာ..မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ”
“ဟေ့ကောင်မိုးပြေး မင်းထင်ရာမြင်ရာတွေ စွတ်ပြောမနေနဲ့ကွ” အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝင်ဟန့်လိုက်မှ၊ရွာမှာအရပ် ပြဇာတ်လုပ်ရင်အမြဲဇာတ်ညွှန်းရေးသူ၊ တစ်နေ့နိုင်ငံကျော်ဘတ်ဆဲလ်လားစာရေး ဆရာဖြစ်ရမယ်လို့အမြဲကြုံးဝါးနေတဲ့.. ကာလသားခေါင်းမိုးပြေး ပါစပ်ပိတ်သွားလေ သည်။အဲ့တော့မှ..ဆရာပင်ကိုကဒေါ်မြသစ် ဘက်လှည့်ပြီး… “အဒေါ် ကျွန်တော်တောင်းပန် ပါတယ်ဗျာ.. ဟို…” “ဒီကိစ္စ တောင်းပန်ရုံပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး.. ကျောင်းဆရာ..” ဒေါ်မြသစ်ဒေါသနဲ့ပြန်ပြောသည်၊ဒေါ်မြသစ် အသံကြောင့်ဝိုင်းအုံနေတဲ့လူတွေဆီမှ.. အသံများကြွတ်စိစိထွက်ပေါ်လာလေသည်။
“ဟုတ်ကဲ့ပါအဒေါ် ဒီကိစ္စကျွန်တော်ဟာ သေချာရင်၊မိအေးကိုတင့်တောင်းတင့်တယ် လက်ထပ်ယူပါ့မယ်၊ဒါပေမယ့်..ကျွန်တော် မေးပါရစေ ရှင်းအောင်.” “ဟုတ်တယ် မိအေး အခုအခြေအနေရောက်မှ ရှက်မနေနဲ့တော့ ဆရာလေးပင်ကိုအပါအဝင်အားလုံးရှင်းအောင် ဆရာလေးမေးတာ ဖြေလိုက်..” အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဝင်ပြောလိုက်တော့.. မိအေးခေါင်းမော့ကြည့်သည်.. “ကဲ ဆရာမေးပါ” ဆရာပင်ကို မိအေးဘက်ဘက်လှည့်ပြီး.. “ညီမလေးမိအေး အခုညည်းကိုယ်ဝန်က ဆရာနဲ့ပက်သက်တာဆိုရင်.. ဘယ်တုန်းက ဆရာနဲ့ငြိစွန်းခဲ့တယ်.. ပြောပြပါ ဆရာတကယ်မမှတ်မိလို့.. မရှက်နဲ့ညီမ ဆရာသာ မှန်ရင်အကုန်တာဝန် ယူမှာပါ” ဆရာပင်ကိုအသံဆုံးတော့ မိအေးခေါင်းမော့ ပြီး .. “လွန်ခဲ့နှစ်လလောက်က ဆရာမြို့က ပြန်လာနောက်ရက်..” မိအေးရဲ့တိကျတဲ့အဖြေကြောင့်.အားလုံး.. “ဟင်”လို့ ဖြစ်သွားသည်..။ ဆရာပင် ကိုလည်းပြန်စဉ်းစားလိုက်လေသည် ဟုတ်သည် သူမြို့ကိုနောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လက သူမှတ်မှတ်ရရသိနေသည် “ဟုတ်ပြီး ဆရာမှတ်မိတယ်..အဲ့နေ့က.. ဘယ်လိုက ဘယ်လိုစဖြစ်တာလဲ.. ပြောပြပါ ညီမ..” “အဲ့နေ့က ကျွန်မလာတော့ ဆရာအ အပေါက် ထဖွင့်ပေးတယ်လေ..” “အင်း ဟုတ်ပြီ..မှတ်မိတယ်..”
“ဆရာကပြောတယ်လေ..ဆရာညကမှမြို့က ပြန်လာတာ အပေါင်းသင်းတွေ နဲ့တွေ့လို့ နည်းနည်းသောက်လာတာ အမူးမကျလို့.. ကျောင်းပိတ်ရက်မို့ပြန်အိပ်လိုက်ဦးမယ်လို့ ဆရာပြောတယ်လေ..” “အင်း မှတ်မိတယ် အဲ့နေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့” “အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မလည်းဘုရားပန်းလဲ.. အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး..ဆရာ့အခန်းထဲက စားပွဲပေါ်ကပန်းအိုးလဲဖို့အလာ..”
အားလုံးငြိမ်သတ်နေသည်..။စိတ်ဝင်စားခန်း ရောက်နေပြီလေ… “အင်း” “အဲ့တော့ ဆရာကဆရာ့အခန်းထဲကုတင် ပေါ်မှာ အင်္ကျီမပါပဲအိပ်ပျော်နေတယ်..” “အင်း” “ကျွန်မလည်းရှက်ရှက်နဲ့ဆရာ့ကိုမကြည့်ပဲ ဆရာ့ကုတင်ဘေးကစားပွဲပေါ်ကပန်းအိုးလေး ယူပြီး ပန်းအသစ်လဲပေးတယ်လေ..” “အင်း” “ပန်းအိုးပြန်ထားပြီးဆရာနိုးမှာစိုးလို့.. ခြေဖွဖွလေးနဲ့..ကြိုးတန်းကဆရာ့အဝတ်စား တွေလျှော်ပေးဖို့အယူ…နောက်ကဆရာက လေ…” အားလုံးနားတွေစွင့်ငန့်လင့်နေကြလေသည်။ ဆရာပင်ကိုက… “အင်း ဆိုပါဦး အာ့အထိဆရာမသိဘူး..” “ဆရာက နောက်ကနေပြီး အိပ်နေရင်းက လက်ယမ်း လိုက်တာ အခုဏကပန်းအိုးလေး ကိုထိမိပြီး ကျကွဲသွားတယ်လေ..”
လူတွေ စိတ်မရှည်သလိုဖြစ်လာသည်..။ “အဲ့တော့..” “ကျွန်မလည်း လန့်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့် တော့ ပန်းအိုးကကြမ်းပြင်မှာကျကွဲ့နေတယ် အခုဏက ကျွန်မလဲပေးထားတဲ့နှင်းဆီပန်း လေးပေါ်ကပျားကောင်လေးထပျံသွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်..အဲ့မှာ ကျွန်မဘဝတော့ သွားပါပြီဆိုတာသိလိုက်ရပြီး..မျက်နှာကို လက်အုပ်ပြီး ဆရာ့အိမ်ကပြေး ထွက်ခဲ့တယ်” “အန်..အာ့နဲ့နင့်မှာကိုယ်ဝန်က..”
“ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာ..ဒီနေ့မှသိလိုက်တာ ပါ မနက်ကကျွန်မသွားတိုက်နေရင်းပျို့တက် လာပြီး အန်တယ် အဲ့မှာကျွန်မကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ ဆိုတာသိလိုက်တာ..” “ဟာ..မဟုတ်သေးပါဘူး..” “ဘာမဟုတ်သေးပါဘူးလဲဆရာ.. မိအေးကိုတောသူဆိုပြီးအထင်မသေးပါနဲ့.. မြန်မာဗွီဒီယိုကားတွေကြည့်ထားတာပါ.. သူဌေးသားကမူးလာတယ် ၊အိမ်ဖော်မလေးက သူဌေးသားအခန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတယ်၊
ပြီးရင် ပန်းအိုးကျကွဲတယ်၊ပန်းပွင့်ကိုပျားက နမ်းပြီး ထပျံသွားတယ်၊နောက်တော့.. အိမ်ဖော်မလေးပျို့အန်တယ်၊ပြီးရင် ကိုယ်ဝန် ရလာတော့ သူဌေးသားကမယူနိုင်ဘူး ငြင်းတယ်.၊ဆရာလည်းငြင်းမှာမလား.. သိပါတယ်..မိအေးကိုကကံဆိုးတာပါ.. အရက်မူးမကျဘူးဆိုကတည်းကလှည့်ပြန် လာရမှာ..အခုတော့ သူ့အခန်းထဲဝင်မိတယ် ပန်းအိုးကွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရတယ်.. ဟီး..” မိအေး ပြောပြောဆိုဆိုဗြဲကနဲထငိုလေသည်။ နားစွင့်နေသောလူအုပ်ကြီး..”ဟင်”ခနဲ.. “ဟာ”ခနဲဖြစ်ကုန်သည်..။.
ထိုအထဲတွင်မှ မိအေးအမေ ဒေါ်မြသစ် မျက်နှာကြီးရဲပြီးပါစပ်ဟောင်းလောင်းကြီး.. အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါသပေါက်ကွဲသွားလေ သည် “ငိုးမမိအေး အဲ ငါဒီလိုဆဲရင်လည်း.. နောက်တစ်ခါပျို့ရင် ငါ့ကြောင့်ဖြစ်ဦးမယ် သွားတော့ ဒေါ်မြသစ် ခင်ဗျားသမီးကို.. ကျမ္မာရေးမှူးဆီခေါ်ပြီးဆေးစစ်ပြလိုက်” ထိုတော့မှ မြို့ကနေတောရွာလေးဆင်းပြီး စာသင်ပေးနေတဲ့ သူဌေးသားလေး.. ဆရာပင်ကိုခဗျာ သက်ပြင်းမောကြီးချမိလေ တော့သည်..။
ကြောငျးဆရာ အိမျမှာ ပနျးအိုး လဲပေးရငျးကနေ စိတျဖောကျသှားတဲ့ တောသူမလေး မိအေး
မိအေး တဟငျ့ဟငျ့ရှိုကျနလေေ သညျ..။ မကျြရညျမြားစိမျ့ဖွာဝဝေဲ့၍ဘဝကိုအစားခံလိုကျရသလို..တလှိုကျလှိုကျဖိုငငျနသေညျ။ “သမီး ဘဝတော့ ပကျြပါပွီ အမရေယျ” “ညညျးကို မေးနတေယျ ဘယျသူနဲ့လဲလို့” “ဟငျ့အငျး ဟငျ့အငျး” မိအေး ခေါငျးကိုသာ တှငျတှငျ ခါရမျးနလေသေညျ..။
အမဖွေဈသူ ဒျေါမွသဈ ခွမေကိုငျလကျ မကိုငျ မိဖွဈနလေသေညျ..။တောသူတောငျသား.. ရိုးသားတဲ့သူတို့သားအမိလေးမှာ..အခုလို. ကွမ်မာငငျလာရတယျလို့..။ “ဒီမှာ မိအေး ညညျးဒီလိုငိုနလေို့မပွီးဘူး.. ကာယကံရှငျကဘာတဲ့လဲ ညညျးကို.. တာဝနျမယူနိုငျဘူးတဲ့လား..” “ဟငျ့အငျး အမေ..သူ သိတောငျမသိသေးဘူး” “ဟငျ..ဟုတျလား ပွောပွောသမီး.. ဘယျသူလဲ အမေ ကောငျလေးနဲ့တှပွေီ့း.. ဒီကိစ်စတာဝနျယူပေးအောငျ ညှိနှိုငျးပေးမယျ အမတေို့ သားအမိအရှကျတကှဲအကြိုးနညျး မဖွဈခငျလေး..” “ဟငျ့ ဟငျ့ ဟီးအဟီး..” မိအေး ငိုသာ ငိုနလေတေော့သညျ..။
“ငိုနလေို့ မပွီးဘူးသမီး အမတေို့သားအမိ ဒီရှာလေး မှာ ပနျးစိုကျရောငျးပွီး.. ရိုးရိုးသားသားနလောခဲ့တာ.. မုဆိုးမသမီးဆိုပွီး အနိုငျကငျြ့တာတော့.. အမမေခံဘူး သမီးရှမှေ့ာအမရှေိတယျ:” မိခငျရဲ့ရငျနငျ့သံနဲ့ပွောစကားကွောငျ့.. မိအေးရငျထဲ လှိုကျကနဲဝမျးနညျးသှားပွီး.. ရှိုကျကွီးတငငျငိုကွှေးလတေော့ သညျ..။ ပွီးမှ…တိုးလှလှအသံလေးနဲ့… “အဟငျ့ ဟငျ့ ဟိုဟို..ဆရာလေး.. ကိုပငျကို.” “ဘာ ဘယျလို..” ဒျေါမွသဈမကျြလုံးပွူးသှားသညျ..။ရငျဘတျလကျလေးဖိပွီးယူကြိုးမရဖွဈသှားလသေညျ။ ဆရာလေးကိုပငျကိုဆိုတာ.. သူတို့ရှာလေးကို မွို့ကစာလာ သငျပေးနေ သော ကြောငျးဆရာလေးဖွဈသညျ..။
ရှာရဲ့ပရဟိတတှအေသငျးလေးထူထောငျ ပေးပွီး သာရေးနာရေးမြားကိုဦးဆောငျလမျး ပွဆောငျရှကျပေးတဲ့သူ..၊ခတျေနဲ့အဆကျ ပကျြနသေောသူတို့ရှာလေးကို အစစအရာ ရာ မကျြစိဖှငျ့အလငျးပွသူ.၊တဈရှာလုံး.. လေးစားကွညျညိုအားထားရသူ၊.. ထိုအထဲတှငျ..ဒျေါမွသဈလညျးပါသညျလေ.၊ ဆရာလေးရဲ့စတေနာအနဈနာ ရှာအပျေါ ထားတဲ့မတ်ေတာ..သကျကွီးရှယျအိုမြားကို.. ရိုသကေိုငျရိုငျးတကျတဲ့လူလိမ်မာသားလေးဆို ပွီး ကွညျညိုခဈြခငျလေးစားခဲ့လသေညျ..။
ထို့ကွောငျ့ပငျ ပနျးရောငျးပွီးအသကျမှေးတဲ့ သူတို့သားအမိအနနေဲ့ဆရာလေးကိုလေးစား ကွညျညိုလို့ ၊ ရှာကပေးနထေားတဲ့ အိမျလေးမှာတဈကိုယျတညျးနတေဲ့ဆရာလေး အိမျကို ၊သမီးဖွဈသူမိအေးကိုမနကျတိုငျး.. ဘုရားပနျးလဲပေး၊အိမျသနျ့ရှငျးပေး၊အဝတျ လြျောပေးဖို့ စလှေတျခိုငျးခဲ့သညျ..။ ဆရာလေးကငှကွေေးယူဖို့ပွောပမေယျ့မယူ ခဲ့ဘူး..၊ဒါကိုကြေးဇူးတုနျ့ပွနျတဲ့အနနေဲ့.. ဆရာလေးမွို့ကိုသှားတိုငျးပွနျလာရငျ.. ဒျေါမွသဈအတှကျဆေးဝါးလေးတှေ၊မိအေး အတှကျအင်ျကြီလုံခညျြလေးတှေ အလငျြးသငျ့ သလို ဝယျလာခဲ့ပေးလသေညျ..။
အခုတော့ အခုတော့ အခုလိုလုပျရကျတယျ..၊ လုံးဝမထငျထားတဲ့ဒျေါမွသဈ..စိတျအကွီး ကယျြဆိုးသှားသညျ..။ “ဒါ ဒေါငျးယောငျဆောငျတဲ့မွခှေေးပဲ” စိတျထဲရှိသလိုရရှေတျလိုကျသညျ..၊ ဒေါငျးယောငျဆောငျသောကြီးလညျးမဟုတျ. “ဒီလိုမြိုးလုပျလို့ဘယျရမလဲ လာမိအေး.. မုဆိုးမသမီးဆိုပွီး ခွတေျောတငျတာ.. မခံဘူးဟေ့..လာခဲ့ ဒီကိစ်စအပွကျရှငျးမယျ” ဒျေါမွသဈ သမီးဖွဈသူမိအေးလကျကိုဆှဲပွီး ဒရောပါးထှကျလာခဲ့လသေညျ..။ ရှာလညျက အုပျခြုပျရေးမှူးအိမျသို့…. ******************************** အုပျခြုပျရေးမှူးအိမျဝငျလိုကျတော့..၊ဝိုငျးအုံ နတေဲ့လူအုပျကွီးကိုတှပွေီ့း ဆရာကိုပငျကို.. မကျြလုံးပွူးသှားသညျ..၊လာချေါတဲ့ဆယျအိမျ မှူးဧးသုရဲ့ပွောစကားအရ မိအေးမှာ.. သူ့ကိုယျဝနျ လှယျထားရလို့ ၊အုပျခြုပျရေးမှူး ဆီလာတိုငျနတေယျတဲ့၊ကိုပငျကို..မကျြလုံး ပွူးသှားသညျ၊မိအေးဆိုတာ..မီးကောငျပေါကျ အရှယျကလေးမလေး၁၆ ၁၇နှဈအရှယျလေး နှမလေး လိုသဘောထားခဲ့သညျ၊စိတျနဲ့တောငျ မပွဈမှားဖူး၊ဘယျလိုကွောငျ့မြား… “လာလာ ဆရာပငျကို” သူလာတော့ အုပျခြုပျရေးမှူးကမကျြနှာမသာ မယာနဲ့လှမျးချေါသညျ၊လူအုပျကရှဲပေးလိုကျ တော့၊အုပျခြုပျရေးမှူးစားပှဲရှမှေ့ာတရှုံ့ရှုံ့ငို နသေောမိအေး၊ဘေး မှာသူ့ကိုမကျြထောငျ့နီ ကွီးနဲ့ကွညျ့နတေဲ့ဒျေါမွသဈ… ”
ကဲဆရာ..မိအေးက သူ့မှာ ဆရာနဲ့ရတဲ့ ကိုယျဝနျရှိနပွေီးတဲ့..” “ဟုတျကဲ့ အဲ မဟုတျကဲ့.. နပေါဦးဗြာ မိအေးကိုကြှနျတျောမေးပါရစေ” “ဒီမှာဆရာ ကြုပျတို့ရှာသူကို စားပွီးနားမလညျ မလုပျပါနဲ့” ဘေးက ကာလသားခေါငျးမိုးပွေးကဝငျပွော သညျ..၊ “အာ စားပွီးနားမလညျ လညျးမလုပျပါဘူး ဝါးပွီးထှေးထုတျလညျးမလုပျပါဘူး.. အခုဟာ က ကြှနျတျောကိုယျတိုငျမသိလို့ မေးပါရစလေို့..” “ဟား ဒါကတော့ရှငျးပါတယျဗြာ.. မိအေးကဆရာ့အိမျကိုနတေို့ငျးပနျးလာလဲပေး ဝယောဝစ်စလာလုပျပေးနတောပဲ.. တဈနေ့ ဆရာမူးလာမယျ၊မိအေးကဆရာ့အိပျ ခနျးထဲသနျ့ရှငျးရေး ဝငျလုပျပေးနမေယျ၊
မူးလာတဲ့ဆရာက၊ဆရာပွောပွောနတေဲ့.. မွို့ကဆရာ့ခဈြသူမှဲ့နီလေးနဲ့အမွငျမှားမယျ ပွီးတော့ မိအေးကို ဟှာပွုမိမယျ၊မိအေးက ရှကျလို့ဘယျသူ့မှမပွောပဲနမေယျ၊ဆရာကမူး ပွီးအိပျပြျောသှားပွီး၊ဘာမှမမှတျမိတော့ဘူး၊ အဲ အခုကအြထုတျအထညျပျေါလာတော့ မိအေးကဖျောလိုကျတယျ၊ဒါပဲပေါ့ဗြ..” ကာလသားခေါငျးမိုးပွေးကသူထငျရာစှတျ ပွောနလေသေညျ..။ “ဟာဗြာ ကြှနျတျောကမနကျအစောကွီး.. မူးရမလားဗြ ၊ကြှနျတျောတဈခါတလေ ပဲသောကျစားတကျတယျ၊ဒါတောငျရှာမှာ ဘယျတော့မှမသောကျဘူး၊ကြောငျးပိတျရကျ မွို့သှားတဲ့အခါ၊သူငယျခငျြးတှနေဲ့တှမှေ့ နညျးနညျးပါးပါးပါ၊ပွီးတော့ဒီကိစ်စကွီးဖွဈတာ မမှတျမိနိုငျလောကျအောငျကွီးတော့.. ဟာ..မဟုတျသေးပါဘူးဗြာ”
“ဟကေ့ောငျမိုးပွေး မငျးထငျရာမွငျရာတှေ စှတျပွောမနနေဲ့ကှ” အုပျခြုပျရေးမှူးဝငျဟနျ့လိုကျမှ၊ရှာမှာအရပျ ပွဇာတျလုပျရငျအမွဲဇာတျညှနျးရေးသူ၊ တဈနနေို့ငျငံကြျောဘတျဆဲလျလားစာရေး ဆရာဖွဈရမယျလို့အမွဲကွုံးဝါးနတေဲ့.. ကာလသားခေါငျးမိုးပွေး ပါစပျပိတျသှားလေ သညျ။အဲ့တော့မှ..ဆရာပငျကိုကဒျေါမွသဈ ဘကျလှညျ့ပွီး… “အဒျေါ ကြှနျတျောတောငျးပနျ ပါတယျဗြာ.. ဟို…” “ဒီကိစ်စ တောငျးပနျရုံပွီးတဲ့ကိစ်စမဟုတျဘူး.. ကြောငျးဆရာ..” ဒျေါမွသဈဒေါသနဲ့ပွနျပွောသညျ၊ဒျေါမွသဈ အသံကွောငျ့ဝိုငျးအုံနတေဲ့လူတှဆေီမှ.. အသံမြားကွှတျစိစိထှကျပျေါလာလသေညျ။
“ဟုတျကဲ့ပါအဒျေါ ဒီကိစ်စကြှနျတျောဟာ သခြောရငျ၊မိအေးကိုတငျ့တောငျးတငျ့တယျ လကျထပျယူပါ့မယျ၊ဒါပမေယျ့..ကြှနျတျော မေးပါရစေ ရှငျးအောငျ.” “ဟုတျတယျ မိအေး အခုအခွအေနရေောကျမှ ရှကျမနနေဲ့တော့ ဆရာလေးပငျကိုအပါအဝငျအားလုံးရှငျးအောငျ ဆရာလေးမေးတာ ဖွလေိုကျ..” အုပျခြုပျရေးမှူးကဝငျပွောလိုကျတော့.. မိအေးခေါငျးမော့ကွညျ့သညျ.. “ကဲ ဆရာမေးပါ” ဆရာပငျကို မိအေးဘကျဘကျလှညျ့ပွီး.. “ညီမလေးမိအေး အခုညညျးကိုယျဝနျက ဆရာနဲ့ပကျသကျတာဆိုရငျ.. ဘယျတုနျးက ဆရာနဲ့ငွိစှနျးခဲ့တယျ.. ပွောပွပါ ဆရာတကယျမမှတျမိလို့.. မရှကျနဲ့ညီမ ဆရာသာ မှနျရငျအကုနျတာဝနျ ယူမှာပါ” ဆရာပငျကိုအသံဆုံးတော့ မိအေးခေါငျးမော့ ပွီး .. “လှနျခဲ့နှဈလလောကျက ဆရာမွို့က ပွနျလာနောကျရကျ..” မိအေးရဲ့တိကတြဲ့အဖွကွေောငျ့.အားလုံး.. “ဟငျ”လို့ ဖွဈသှားသညျ..။ ဆရာပငျ ကိုလညျးပွနျစဉျးစားလိုကျလသေညျ ဟုတျသညျ သူမွို့ကိုနောကျဆုံးသှားခဲ့တာ လှနျခဲ့တဲ့နှဈလက သူမှတျမှတျရရသိနသေညျ “ဟုတျပွီး ဆရာမှတျမိတယျ..အဲ့နကေ့.. ဘယျလိုက ဘယျလိုစဖွဈတာလဲ.. ပွောပွပါ ညီမ..” “အဲ့နကေ့ ကြှနျမလာတော့ ဆရာအ အပေါကျ ထဖှငျ့ပေးတယျလေ..” “အငျး ဟုတျပွီ..မှတျမိတယျ..”
“ဆရာကပွောတယျလေ..ဆရာညကမှမွို့က ပွနျလာတာ အပေါငျးသငျးတှေ နဲ့တှလေို့ နညျးနညျးသောကျလာတာ အမူးမကလြို့.. ကြောငျးပိတျရကျမို့ပွနျအိပျလိုကျဦးမယျလို့ ဆရာပွောတယျလေ..” “အငျး မှတျမိတယျ အဲ့နကေ့တနင်ျဂနှနေေ့” “အဲ့ဒါနဲ့ကြှနျမလညျးဘုရားပနျးလဲ.. အိမျသနျ့ရှငျးရေးလုပျပွီး..ဆရာ့အခနျးထဲက စားပှဲပျေါကပနျးအိုးလဲဖို့အလာ..”
အားလုံးငွိမျသတျနသေညျ..။စိတျဝငျစားခနျး ရောကျနပွေီလေ… “အငျး” “အဲ့တော့ ဆရာကဆရာ့အခနျးထဲကုတငျ ပျေါမှာ အင်ျကြီမပါပဲအိပျပြျောနတေယျ..” “အငျး” “ကြှနျမလညျးရှကျရှကျနဲ့ဆရာ့ကိုမကွညျ့ပဲ ဆရာ့ကုတငျဘေးကစားပှဲပျေါကပနျးအိုးလေး ယူပွီး ပနျးအသဈလဲပေးတယျလေ..” “အငျး” “ပနျးအိုးပွနျထားပွီးဆရာနိုးမှာစိုးလို့.. ခွဖှေဖှလေးနဲ့..ကွိုးတနျးကဆရာ့အဝတျစား တှလြှေျောပေးဖို့အယူ…နောကျကဆရာက လေ…” အားလုံးနားတှစှေငျ့ငနျ့လငျ့နကွေလသေညျ။ ဆရာပငျကိုက… “အငျး ဆိုပါဦး အာ့အထိဆရာမသိဘူး..” “ဆရာက နောကျကနပွေီး အိပျနရေငျးက လကျယမျး လိုကျတာ အခုဏကပနျးအိုးလေး ကိုထိမိပွီး ကကြှဲသှားတယျလေ..”
လူတှေ စိတျမရှညျသလိုဖွဈလာသညျ..။ “အဲ့တော့..” “ကြှနျမလညျး လနျ့ပွီးနောကျလှညျ့ကွညျ့ တော့ ပနျးအိုးကကွမျးပွငျမှာကကြှဲ့နတေယျ အခုဏက ကြှနျမလဲပေးထားတဲ့နှငျးဆီပနျး လေးပျေါကပြားကောငျလေးထပြံသှားတာ တှလေို့ကျရတယျ..အဲ့မှာ ကြှနျမဘဝတော့ သှားပါပွီဆိုတာသိလိုကျရပွီး..မကျြနှာကို လကျအုပျပွီး ဆရာ့အိမျကပွေး ထှကျခဲ့တယျ” “အနျ..အာ့နဲ့နငျ့မှာကိုယျဝနျက..”
“ကိုယျဝနျရှိနပွေီဆိုတာ..ဒီနမှေ့သိလိုကျတာ ပါ မနကျကကြှနျမသှားတိုကျနရေငျးပြို့တကျ လာပွီး အနျတယျ အဲ့မှာကြှနျမကိုယျဝနျရှိနပွေီ ဆိုတာသိလိုကျတာ..” “ဟာ..မဟုတျသေးပါဘူး..” “ဘာမဟုတျသေးပါဘူးလဲဆရာ.. မိအေးကိုတောသူဆိုပွီးအထငျမသေးပါနဲ့.. မွနျမာဗှီဒီယိုကားတှကွေညျ့ထားတာပါ.. သူဌေးသားကမူးလာတယျ ၊အိမျဖျောမလေးက သူဌေးသားအခနျးသနျ့ရှငျးရေးလုပျနတေယျ၊
ပွီးရငျ ပနျးအိုးကကြှဲတယျ၊ပနျးပှငျ့ကိုပြားက နမျးပွီး ထပြံသှားတယျ၊နောကျတော့.. အိမျဖျောမလေးပြို့အနျတယျ၊ပွီးရငျ ကိုယျဝနျ ရလာတော့ သူဌေးသားကမယူနိုငျဘူး ငွငျးတယျ.၊ဆရာလညျးငွငျးမှာမလား.. သိပါတယျ..မိအေးကိုကကံဆိုးတာပါ.. အရကျမူးမကဘြူးဆိုကတညျးကလှညျ့ပွနျ လာရမှာ..အခုတော့ သူ့အခနျးထဲဝငျမိတယျ ပနျးအိုးကှဲတဲ့အဆငျ့ကိုရောကျရတယျ.. ဟီး..” မိအေး ပွောပွောဆိုဆိုဗွဲကနဲထငိုလသေညျ။ နားစှငျ့နသေောလူအုပျကွီး..”ဟငျ”ခနဲ.. “ဟာ”ခနဲဖွဈကုနျသညျ..။.
ထိုအထဲတှငျမှ မိအေးအမေ ဒျေါမွသဈ မကျြနှာကွီးရဲပွီးပါစပျဟောငျးလောငျးကွီး.. အုပျခြုပျရေးမှူး ဒေါသပေါကျကှဲသှားလေ သညျ “ငိုးမမိအေး အဲ ငါဒီလိုဆဲရငျလညျး.. နောကျတဈခါပြို့ရငျ ငါ့ကွောငျ့ဖွဈဦးမယျ သှားတော့ ဒျေါမွသဈ ခငျဗြားသမီးကို.. ကမ်ြမာရေးမှူးဆီချေါပွီးဆေးစဈပွလိုကျ” ထိုတော့မှ မွို့ကနတေောရှာလေးဆငျးပွီး စာသငျပေးနတေဲ့ သူဌေးသားလေး.. ဆရာပငျကိုခဗြာ သကျပွငျးမောကွီးခမြိလေ တော့သညျ..။
ခန်ဓာကိုယျ တှငျး သှေးလှညျ့ ပတျမှု ကို ကောငျးမှနျစေ တဲ့ အစား အစာ (၅) မြိုး
ဆရာမင်းသိင်္ခ ၏ (၇) နေ့ သားသမီးများ အတွက် တပတ် စာ ဟော စာတမ်း (၁၆.၈.၂၀) မှ (၂၂.၈.၂၀) ရက်နေ့ အထိ
သင့်ကျန်းမာရေး မထိ ခိုက်စေဖို့ တတ်နိုင် သလောက် ရှောင်ရှား သင့်တဲ့ အစား အသောက်များ
သင့် ရဲ့ ညာ လက်ဖဝါး ကို ဖြန့် ကြည့် လိုက် ရေအာင်.. နံပါတ် ဘယ်ေ လာက်လဲ..?
မကျြလုံးတှေ ပွူးသှားအောငျ ရငျသားကို ဖျောပွလိုကျ တဲ့ XMUE XMUE ရဲ့ ဗီဒီယို
လနျဒနျက မျောဒယျအဂေငျြစီ တဈခုနဲ့ စာခြုပျခြုပျ လိုကျနိုငျပွီတဲ့ အလှမယျ သူဇာဝငျ့လှငျ
ရငျခုနျစရာ ကောငျးအောငျ ဖမျးစားထား တဲ့ သှနျးဆကျ ရဲ့ အမိုကျစား ဗီဒီယို
ယခုအခြိနျ​ကစပွီး ပရိတျသတျရှကေို့ လုံးဝပွနျမလာ တော့ဘူးဆို​သော ဟာသသရုပျဆောငျ ဗလေုဝ ရဲ့ (ရုပျ​သံ)
ခဈြစရာ ပုံစံလေး နဲ့ ဆှဲဆောငျမှု ရှိနတေဲ့ ခေးဆကျသှငျ ရဲ့ အမိုကျစား ဗီဒီယို
နှဦေးတျောလှနျရေးမှာ အပျေါ ယံသာ လုပျပွခဲ့တယျလို့ ပရိတျသတျတှရေဲ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဝဖေနျခံနရေ တဲ့ ဝတျမှုံရှရေညျ.